Akụkọ banyere Matryoshka, nwa bebi Russia | Njem zuru oke
Akụkọ banyere Matryoshka, nwa bebi Russia
Ọ bụrụ na anyị jụọ onwe anyị ihe ncheta kachasị dị mma anyị nwere ike ịla n'ụlọ ma anyị gachara njem na Russia, n'ezie ọtụtụ n'ime anyị ga-aza n'egbughị oge na ebe nchekwa kacha mma bụ matrioshka.
Ọ bụ otu n'ime ihe egwuregwu ụmụaka ndị ama ama n'ụwa niile, nke ị ga-achọpụta nke ọma ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịgabeghị Russia na mbụ. N'ezie, ama ha dị ka matrioshkas abụrụla ihe eji achọ mma na akara ejiji. Ihe ọzọ bụ na, ị nwere ike ịnwe matrioshka n'ụlọ ma ị gaghị echeta ebe ị nwetara ya.
Matrioshkas nwere ntozu mmasi na nwekwa ezigbo ihe pụtara ndị Russia mgbe ha natara ha dị ka onyinye. Ọ bụrụ na ị na-eche mgbe niile ihe akụkọ ihe mere eme nke egwuri egwu a bụ, ebe aha ya si na ihe ọ na-anọchite anya ya, ị gaghị echefu isiokwu a ebe m ga-aza ajụjụ ndị a niile.
1 Kedu ihe bụ matrioshkas?
2 Gịnị ka matrioshkas nọchiri anya ya?
3 Olee otu esi eme matrioshkas?
4 Ebee ka aha matrioshka si?
5 Kedu ihe atụ nke matrioshkas?
6 Kedu ihe bụ akụkọ banyere matrioshkas?
7 Ihe ngosi nka nke Moscow Matryoshka
8 Nye matrioshka
Kedu ihe bụ matrioshkas?
Ha bụ ụmụ bebi osisi nke na-edebe ọtụtụ ihe ha nwere nha dịgasị iche.. Dabere na nne matrioshka, n'ime anyị nwere ike ịchọta n'etiti opekempe ise na nke kachasị nke matrioshkas iri abụọ, nke ọ bụla pere mpe karịa nke gara aga. Zingtụnanya!
Gịnị ka matrioshkas nọchiri anya ya?
Matrioshkas na-anọchite anya ụmụ nwanyị nwanyị Russia ndị agbata obi ma bụrụ akara ngosi ọdịnala nke mba ahụ.
Olee otu esi eme matrioshkas?
Iji mee matrioshkas, osisi ndị kachasị eji eme ihe bụ ndị na-esite na alder, balsa ma ọ bụ birch, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ osisi kachasị eji eme ihe bụ linden.
A na-egbutu osisi n'April, nke bụ mgbe ha jupụtara na sap, na a na-eme ka osisi ndị ahụ dịkarịa ala afọ abụọ site na ịmịcha ha na sap iji gbochie nkụ ahụ ịkụ.
Mgbe ha dịchara, ndị ọkwá nkà ahụ na-egbutu ogologo kwesịrị ekwesị ma ziga ha n'ụlọ ọrụ ahụ ka ha rụọ nkụ ahụ na nkebi 15. Akpa matrioshka nke emere bụ nke pere mpe mgbe niile.
Ebee ka aha matrioshka si?
Aha nke ihe eji egwuri egwu a sitere na «Matriona», otu n’ime ewu ewu n’oge ochie Russia, nke n’aka ya sitere na Latin «mater» nke pụtara nne. Mgbe e mesịrị, a gbanwere okwu ahụ "Matriona" na matrioshka iji gosipụta nwa bebi a. Okwu ndị ọzọ a na-ejikwa na-ezo aka matrioshkas bụ aha ndị dị ka mamushka na babushka.
Kedu ihe atụ nke matrioshkas?
Matrioshkas Russia na-ese onyinyo ọmụmụ, nne na ndụ ebighi ebi. Nke ahụ pụtara, otu ezinụlọ buru ibu ma dịrị n'otu ebe nne mụrụ nwa nwanyị, nke a nye nwa nwa ya, ọ bụ nwa nwa ya na ihe ọzọ ruo mgbe na-anọchi anya ụwa na-enweghị njedebe.
Na mbu, ọ bụ naanị ụmụ bebi ka a pịrị apị, ma emesịa e mepụtaghachiri ọnụ ọgụgụ ụmụ nwoke ka ha wee mejupụta ezinụlọ ma na-anọchitekwa ụkpụrụ ndị ọzọ dịka nwanne na nwanne. Ka oge na-aga, ha bidokwara ịme Russia matrioshkas nke na-anọchite anya ndị ama ama ama ama ama ama.
Kedu ihe bụ akụkọ banyere matrioshkas?
Ekwuru na na njedebe nke narị afọ nke XNUMX, onye ahịa Russia na onye nchebe Savva Mamontov mere njem na Japan ebe ọ gara ngosi ihe ngosi nka nke ọ mụtara banyere ochie nke matrioshkas. Ọ bụ ihe nnọchianya nke chi asaa nke dị n'ime nke ọzọ bụ Fukurokuju (chi nke obi uto na amamihe) nke kacha ochie na nke nwere chi ndi ozo.
Mamontov debere echiche ahụ ma laghachi na Russia ọ kọọrọ ya onye na-ese ihe na onye na-atụgharị ya Sergei Maliutin ka o wee nwee ụdị nke Japanese. N’ụzọ dị otú a, e kere nwa bebi nke nọchitere anya onye ọrụ ugbo Russia nwere obi ụtọ nke nabatara ụmụ ya niile.
Egwuregwu ahụ mere ka e nwee mmetụta na 1900 Paris World Fair, ebe ọ gara n'ihu inweta ọla nchara, na soonlọ ọrụ malitere n'oge na-adịghị anya na Russia na-emepụta matryoshka maka ire ere na mba ahụ na West. N'ụzọ dị otú a, ọ ghọwo akara ngosi nke ọdịnala Russia na ihe ncheta kachasị amachite anya mba ahụ. Onye ọ bụla omenkà na-akpụ ụmụ bebi ya onwe ha ma ha aghọọla egwuregwu ụmụaka bara ezigbo uru n'ihi na ha na-abụkarị ihe ndị nchịkọta.
Ihe ngosi nka nke Moscow Matryoshka
N'ezie, ha dị oke mkpa nke na 2001 mepere ya na Moscow, rlọ ihe ngosi nka Matryoshka iji kpọsa akụkọ ihe mere eme nke ihe egwuregwu ndị a na mgbanwe ha n'oge oge.
Muselọ ihe ngosi nka a na-egosiputa ụfọdụ mbụ mbụ matrioshkas Russia nke emepụtara na mbido narị afọ nke XNUMX na otu esi agbanwe usoro ha kemgbe ọtụtụ afọ.
Iji maa atụ, n’afọ ndị 1920 Bolshevik matrioshkas nọchitere anya ndị otu na - arụ ọrụ yana ọbụlagodi ọnụ ọgụgụ nke “kulak” (okwu eji eji ọjoụ eme ihe iji zoo aka na ndị ọrụ ugbo bara ọgaranya) ka emegharịrị na-eyi okpu ma jiri ogwe aka gafere nnukwu afọ.
N'oge USSR, gọọmentị chọrọ igosipụta mba mba Soviet na matrioshkas yana mba dị iche iche dịka Belarusian, Ukraine, Russian, wdg. Ọbụlagodi n'ọsọ oghere mbara igwe, e mepụtara ọtụtụ ụmụ bebi astronaut na uwe ha na-egwu mmiri na oghere rọketi.
Mgbe njedebe nke USSR, isiokwu nke matrioshkas dịgasị iche iche na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ma ama na ndị ama ama mba dị iche iche malitere ịnọchitere anya ya.
Na-agagharị na nchịkọta ọ na-atọ ụtọ iji tụnyere matrioshkas ọdịnala na nke kachasị ọhụrụ. yana ndị ọnụọgụ ndị Japan nke dio Fukuruma nke kpaliri ha. Lọ ihe ngosi nka na-egosikwa ọdịiche dị na matryoshka sitere na mpaghara dị iche iche nke Russia ma na-enye ozi gbasara ndụ na ọrụ nke ndị na-eduzi ndị omenkà na matryoshka ndị Russia.
Maka ndị Russia ọ nwere nnukwu ihe ọ pụtara inye matryoshka dị ka onyinye. Mgbe mmadụ natara otu n'ime ụmụ bebi ndị a dị ka onyinye, ha ga-emepe nke mbụ matrioshka ma mee ihe ha chọrọ. Ozugbo emezue ya, ị nwere ike mepee nwa bebi nke abụọ ma chọọ ọhụụ ọhụrụ. Ya mere, ruo mgbe ikpeazụ na nke kacha nta matryoshka ruru.
Ozugbo emepere matrioshkas nile, onye obula natara onyinye a aghaghi inye ya nkpuru ka o gosi na ha si akwu si. Na mbu, ndi nwanyi mere nke a. Ọ bụ naanị ha na-elekọta ụlọ ndị ahụ ma nwee ike ịmechaa ịnyefe ụmụ ha matrioshkas.
Ọ bụ ya mere na ọ bụrụ na mmadụ enye gị matrioshka, Ekwuru na ọdịbendị Russia na ọ na-enye gị ịhụnanya na mmetụta ya n'ụdị egwuregwu ụmụaka.
Ọ bụrụ, n'aka nke ọzọ, ị bụ onye ga-enye matryoshka dị ka onyinye, na mgbakwunye na ịnye nkọwa a, ihe kachasị mma ị nwere ike ime bụ ịgwa onye natara ya ihe na akụkọ ihe mere eme nke onyinye ahụ ugbu a ị maara ya. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-eji onyinye ahụ kpọrọ ihe karịa ma mara ihe a ga-eji matryoshka kacha ọhụrụ na nke pere mpe.
Omenalaomenalaakụkọ ihe mere emeSociety
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Akụkọ banyere Matryoshka, nwa bebi Russia
Egwuregwu na egwuregwu na Egypt oge ochie
Mụ nwanyị Bollywood kacha mma